Bit By Bit - Ukudala ukubambisana okukhulu - Imisebenzi
[ , , , ] Iminye yezimangalo ezithandekayo ezivela eBenoit kanye nozakwethu (2016) ucwaningo ngokubamba izinkampani zamakhompiyutha ezombusazwe wukuthi imiphumela yenziwa ngokuphindaphindiwe. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) banikeza ukufinyelela kuManfesto Corpus. Zama ukuzala isithombe sesi-2 kusuka ku- Benoit et al. (2016) besebenzisa abasebenzi base-Amazon Mechanical Turk. Imiphumela yakho ifana kanjani?
[ ] Emkhakheni we-InfluenzaNet iqembu lezisebenzi zokuzithandela libika ukukhubazeka, ukusabalalisa, nokuziphatha okufuna impilo ehlobene nokugula okunjengomkhuhlane (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Qhathanisa uphinde uqhathanise amaphrojekthi, izindleko, kanye namaphutha ku-InfluenzaNet, Amathrendi we-Google Flu, kanye nezinhlelo zendabuko yokulandela umkhuhlane.
Cabanga ngesikhatsi esingaxhaswanga, njengokuqhamuka kwenhlobo yombhobho. Chaza amaphutha kungenzeka kunqubo ngayinye.
[ , , ] I- Economist ingumagazini wezindaba wamasonto onke. Dala iphrojekthi yokubala yomuntu ukuze ubone ukuthi isilinganiso sabesifazane besilisa esikhwameni sishintshile ngokuhamba kwesikhathi.
Umagazini ungaba nezizinda ezahlukene ezifundeni eziyisishiyagalombili (i-Afrika, i-Asia Pacific, iYurophu, i-European Union, i-Latin America, i-Middle East, iNyakatho Melika, ne-United Kingdom) futhi konke kungalandwa kusuka kuwebhusayithi yomagazini. Khetha eyodwa yalezi zifunda bese wenza ukuhlaziywa. Qinisekisa ukuthi uchaza izinqubo zakho ngemininingwane eyanele ukuthi ingaphindwa omunye umuntu.
Lo mbuzo uphefumulelwe iphrojekthi efana noJustin Tenuto, ososayensi wedatha ku-crowdsourcing inkampani CrowdFlower: bheka "I-Time Magazine iyakuthanda ama-Dudes" (http://www.crowdflower.com/blog/time-magazine-cover-data) .
[ , , ] Ukwakha kumbuzo odlule, manje yenza ukuhlaziywa kuzo zonke izifunda eziyisishiyagalombili.
Yimuphi umehluko owawuthola kuzo zonke izifunda?
Yithatha isikhathi esingakanani kanye nemali eyengeziwe ukukala ukuhlaziywa kwakho kuzo zonke izifunda ezingu-8?
Cabanga ukuthi i- Economist ihlanganisa isembozo esingama-100 ngesonto ngalinye. Linganisa ukuthi kungakanani isikhathi nemali eyengeziwe okuzoyithatha ukuze uhlaziye ukuhlaziywa kwakho ukuze uhlanganise nesembozo esingu-100 ngesonto.
[ , ] Kukhona amawebhusayithi amaningana afaka amaphrojekthi evuliwe, njenge-Kaggle. Bamba iqhaza kwelinye lamaphrojekthi, bese uchaza ukuthi ufundani ngalowo msebenzi othize nangamakholi avulekile ngokujwayelekile.
[ ] Bheka umagazini wakamuva wendaba ensimini yakho. Zikhona yini amaphepha angahle aguqulwe njengamaphrojekthi okuvula ucingo? Kungani noma kungani?
[ ] I- Purdam (2014) ichaza ukuqoqwa kwedatha Purdam (2014) eLondon. Qinisekisa amandla kanye nobuthakathaka balezi zindlela zokucwaninga.
[ ] I-Redundancy yindlela ebalulekile yokuhlola ikhwalithi yokuqoqwa kwedatha esatshalaliswe. Windt and Humphreys (2016) bahlakulele futhi bavivinya uhlelo lokuqoqa imibiko yemicimbi yezingxabano kubantu baseMpumalanga Congo. Funda iphepha.
Imiklamo yabo iqinisekisa kanjani ukuthi i-redundancy?
Banikeza izindlela eziningana zokuqinisekisa idatha eqoqwe kusuka kumsebenzi wabo. Yibinise. Yikuphi okukukholisa kakhulu kuwe?
Phakamisa indlela entsha ukuthi idatha ingaqinisekiswa ngayo. Iziphakamiso kufanele zizame ukwandisa ukuzethemba ongayithola kulo idatha ngendlela ebiza izindleko nokuziphatha.
[ ] U-Karim Lakhani nozakwabo (2013) bafaka ikholi evulekile yokucela izinqubo ezintsha zokuxazulula inkinga ku-biology yezobuchwepheshe. Bathole ukuthunyelwa okungaphezu kuka-600 okuqukethe izindlela eziyi-89 zokusebenzisa ulwazi. Kulezi zingeniso, ama-30 adlule ukusebenza kwe-US National Institutes of Health MegaBLAST, futhi ukuhanjiswa okungcono kakhulu kufinyelele kokubili ngokunemba okukhulu nokusheshisa (izikhathi ezingu-1,000 ngokushesha).
Funda iphepha labo, bese uphakamisa inkinga yokucwaninga yomphakathi engasebenzisa uhlobo olufanayo lomncintiswano ovulekile. Ngokuyinhloko, lolu hlobo lomncintiswano ovulekile lugxile ekusheshiseni nasekuthuthukiseni ukusebenza kwe-algorithm ekhona. Uma ungeke ucabange ngenkinga efana nalokhu ensimini yakho, zama ukuchaza ukuthi kungani kungenjalo.
[ , ] Amaphrojekthi amaningi okubalwa komuntu athembele kubahlanganyeli abavela ku-Amazon Mechanical Turk. Bhalisa ukuze ube yisisebenzi ku-Amazon Mechanical Turk. Sebenzisa ihora elilodwa usebenza lapho. Lokhu kuthinta kanjani imicabango yakho mayelana nokuklama, ikhwalithi, nokuziphatha kwamaphrojekthi wokubala kwabantu?